हृदयविदारक तस्बिर: फकाउन नसकेपछि मृत आमाकै काखमा राखियो बच्चालाई! – Classic Khabar
हृदयविदारक तस्बिर: फकाउन नसकेपछि मृत आमाकै काखमा राखियो बच्चालाई!
अहिले एउटा हृदयविदारक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ। जुन तस्बिरमा एक बच्चा मृत आमाको काखमा बसेका छन्। बस यात्राका क्रममै मुटुरोगले बसभित्रै आमाको मृत्यु भएपछि आमा खोज्दै रुन थालेपछि फकाउन ती बच्चालाई मृत आमाकै काखमा राखिएको हो।
बस चढेपछि धर्माकुमारीले त्यसको जानकारी श्रीमानलाई दिइन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेका श्रीमान दलबहादुर बटालासँग सल्लाह गरि उपचारका लागि भनेर धर्माकुमारी नाबालक छोराको साथ बस चढेकी थिइन्।
साउन ४ गतेदेखि नेपालगञ्जमा बस्दै आएका दलबहादुर बिल्डिङ सम्बन्धी ठेक्कापट्टाको काम गर्छन्। ‘घरमा आमा छोरा मात्रै बस्थे। उपचार गर्न नेपालगञ्ज जाने भनेर धर्माकुमारीले घर धन्दाको काम बिहीबार दिउँसो सबेरै सकिन्। आफू फर्केर नआउँदासम्म घर रेखदेख गरिदिने आफन्त र छरछिमेकलाई मिलाइन्’, दलबहादुरले भने, ‘भिडियो एक्सरे गर्दा पनि मेरो नर्मल अवस्था देखाएको छ, भन्ने गर्थिन्।’
त्यसअगाडि उनले उपचारका लागि झन्डै चार लाख खर्चिएका थिए। ‘उनको माइती डडेलधुराबाट पनि उपचारमा सहयोग भएको हो र मैले पनि श्रीमतीको उपचार गर्दै आएको थिएँ,’ दलबहादुरले भने।
बोटेचौर भन्ने ठाउँमा आइपुगेपछि धर्माकुमारीले दुई/तीन पटक वान्ता गरिन्। तर, उनी त्यसपछि सामान्य अवस्थामा सिटमा बसिन्। मध्यरात भइसकेको थियो। बस आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। सबै यात्रु निदाए जस्तै वातारण थियो। बर्दियाको हरिया लेक आइपुग्दा एकाएक ३२ महिनाका किरण बटला रोएको आवाज केसीले सुने।
सेतो पाटीका अनुसार ‘यसो फर्केर मैले हेर्दा बच्चा सिटदेखि तल खसेको मैले देखे,’ केसीले भने, ‘त्यसपछि म लगाएत अरूले धर्माकुमारीलाई उठाउन खोज्यौं, तर उहाँ हलचल गर्नुभएन।’
बच्चा रोइरहेको हुँदा केसीलगाएत बसमा यात्रारत अरू यात्रुहरुले पालैपालो समाते। शुक्रबार बिहान श्रीमतीलाई सकुशल नेपालगञ्जमा स्वागत गर्ने प्रतिक्षमा बसेका दलबहादुर एकाबिहानै श्रीमतीलाई सदाको लागि गुमाउनु परेको खबर सुन्दा छाँगाबाट खसेझैं भए।
उनी पौने ६ बजेतिर गाडी लगेर बस आउने ठाउँ कोहलपुरको दश बिगाहा पुगे। छोरा बुवा देखेर अलि शान्त बन्यो। तै रोइरहेको छोरालाई चुम्बन गर्दै त्यहाँ आफन्तको जिम्मा लगाएर उनले अस्थित भइसकेकी श्रीमती धर्माकुमारीलाई तत्कालै त्यही नर्सिङ स्टाफ बोलाएर चेकजाँच गर्न लगाए। ‘अब उहाँको सम्भावाना छैन,’ भन्ने वाक्यले उनका आँशु झरे। तै उनले गाडी दौडाउन लगाएर नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा पुर्‍याए।
यात्राकै क्रममा धर्माकुमारीको मृत्यु पछि किरण धेरै रोएको हुँदा उनलाई फुल्याउन अरु यात्रुले आमाको काखमा राखेको फोटा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। यो तस्बिर बसमा यात्रारत कुनै यात्रुले खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि त्यसलाई सयौं फेसबुक प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। श्रोत सेतो पाटि
Prevआठ महिनाकी बालिकासहित एकै परिवारका तीन जनाले देहत्याग
Nextयी तिन जना झापालीले गरे यस्तो काम , पैसा कमाउने उनीहरुको आइडिया देखेर प्रहरी नै पर्यो चकित !
१० जनालाई सोध्दा पनि पत्यारै लागेन तर जे नहोस् भनेर भगवान संग प्रथाना गरेको थिए त्यही भयो ….. (भिडियो)